Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » WTM dịịrị ihe nrịba ama ndị njem nlegharị anya mara ọkwa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • nzukọ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
WTM dịịrị ihe nrịba ama ndị njem nlegharị anya mara ọkwa.
Ekwuputala ndị mmeri nke WTM Responsible Tourism Awards, na-eme mmemme kacha mma n'ụwa niile.
Ihe nrite ndị a, nke ewepụtara na 2004, na-amata ma na-akwụghachi azụmaahịa azụmaahịa na ebe ndị na-enye aka na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na-adigide ma nweekwa ọrụ.
Ndị ọkachamara ụlọ ọrụ họpụtara ndị mmeri, bụ ndị zukọrọ na ntanetị iji nye ohere maka otu panel dị iche iche nke mba ụwa.
N'afọ a, India pụtara ìhè na Awards na-apụta dị ka obodo na-eduga maka njem nlegharị anya na-ahụ maka ọrụ.
Steeti India ahụla uru na Kerala sitere na mbọ ndị ọrụ njem nlegharị anya na-arụ ọrụ kemgbe 2008.
A họrọla ndị mmeri Global Award site na ndị kacha mma nke India na ihe nrite ndị ọzọ nke ụwa yana ndị kacha mma nke abanyelarị maka Africa na Latin America.
Decarbonising Njem & Nlegharị anya
Mgbanwe ihu igwe dị na anyị. Ọ bụ ihe anyị ga-amụta ugbu a ka anyị na ya na-ebi. Mgbanwe ihu igwe ga-enwe nnukwu nsonaazụ maka azụmaahịa na mpaghara anyị yana ndị mmadụ na anụ ọhịa sitere na ahịa ahịa na ebe aga.
Anyị ga-achọkwa ụzọ anyị ga-esi belata carbon nke ndị mmadụ na-eme njem na n'oge ezumike na-eme ka a na-ebupụ.
Anyị ga-agbanwe mmepụta na oriri nke njem nlegharị anya - njem, ebe obibi, ebe nkiri na ihe omume niile kwesịrị ime ihe iji belata ikuku gas.
Site na nturu ugo a, anyị ga-achọ igosi ihe atụ nke teknụzụ, usoro njikwa na ụzọ isi gbanwee omume ndị na-azụ ahịa bụ ndị na-egosi na ọ belatara ikuku ikuku griin haus.
Ndị ọka ikpe maka onyinye nturu ugo zuru ụwa ọnụ kwuru na e nwere mpaghara siri ike karị n'afọ a ma chọọ imesi ike dị mkpa nke ọgbọ dị ọcha nke ike na ihe a ga-eme, site n'inweta ngwọta nkà na ụzụ, iji nweta ezigbo mbelata nke ikuku.
Obodo Govardhan bụ ebe mgbagha 100-acre na obodo ugbo ihe atụ, ogige ụlọ akwụkwọ na-egosi teknụzụ ọzọ ma na-enye ọgbakọ obibi na mmemme ọmụmụ, na-adọta ndị njem nlegharị anya 50,000 kwa afọ. Mgbalị e mere na Govardhan masịrị ndị ọka ikpe ahụ nke ukwuu iji zere ihe ndị na-emepụta ihe n'usoro ụlọ na arụ ọrụ. Site na ikuku efu, 210kW nke ogwe anwụ na-ebuga nkeji 184,800 nke ọkụ eletrik kwa afọ.
Osisi biogas na-atụgharị nsị ehi na ihe mkpofu mmiri ndị ọzọ ka ọ bụrụ nkeji 30,660. Osisi pyrolysis na-ahazi ihe mkpofu rọba n'ime lita 18,720 mmanụ mmanụ dizel ọkụ 52,416 nke ọkụ eletrik. Nleba anya ike na-echekwa nkeji 35,250.
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ala bio-Technology na-ahazi nsị n'ime mmiri isi awọ nke a na-eji eme mmiri, na-echekwa 247,000 nkeji a chọrọ iji gbanye mmiri n'osimiri na iweta mmiri ozuzo zuru ezu ruo ọnwa karịa oge mmiri ozuzo. A na-ewu ụlọ ndị dị n'ogige ahụ site na mkpakọ stabilized earth blocks (DSEB). Ọ bụ ezie na mgbidi brik a na-ahụkarị na-ewe 75 MJ ike, mgbidi CSEB na Govardhan na-ewe nanị 0.275 MJ; A na-enweta ihe niile site n'ime 100km iji belata ikuku carbon sitere na njem.
Ịkwado ndị ọrụ na obodo site na ọrịa na-efe efe
Anyị ghọtara na ọrịa a akwụsịbeghị, yana dịka Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-echetara anyị nke ọma, anyị enweghị nchebe ruo mgbe anyị niile nọ na nchekwa. Ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa tupu njem na mpịakọta ezumike gbakee n'ihe ọ bụla "dị ọhụrụ" ga-abụ. Anyị maara na ọtụtụ azụmahịa na òtù dị iche iche na njem na njem nlegharị anya na-agbasi mbọ ike ịkwado ndị ọrụ ha na obodo ha na-arụ ọrụ na-enwe mmetụta dị mma n'ezie gburugburu ụwa. Ọtụtụ n'ime mbọ ndị a etinyela ndị ọzọ n'usoro ọkọnọ ha na ndị na-azụ ahịa.
Ọ ga-amasị anyị ịmata ma dọta uche gaa na ndị nyeerela ndị ọzọ aka nke ọma, ndị ọrụ na ndị agbata obi, iji merie oke mmiri ozuzo ahụ.
V&A Waterfront na-egosiputa ihe enwere ike nweta site na nnukwu azụmaahịa ebe a na-eme mkpebi siri ike ịrụ ọrụ n'iji ọnụ ọgụgụ ya na ike ya wee rite uru ndị ewepụrụ na ndị a kewapụrụ.
V&A Waterfront bụ ebe ejikọtara ọnụ na ọdụ ụgbọ mmiri dị na Cape Town, “ikpo okwu nke na-eme ka nka na nka na-akwado nka na imepụta ihe, iji kwado azụmaahịa na ihe ọhụrụ, na-eduga ụgwọ maka nkwado na ịkwalite mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba dị mma.”
Ọ gara n'ihu na-eto eto na 3.7% kwa afọ site na ọrịa na-efe efe. Na Disemba 2020, ka ikpe na-arị elu, ha bidoro Makers Landing, obodo nri na-eme omenala dị iche iche South Africa site na nri.
Enwere kichin incubator na-ekerịta, kichin ngosi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe asatọ, ahịa nri nwere ihe dị ka ụlọ ahịa 35 na-agbanwe agbanwe, obere ụlọ nri asatọ na ụlọ nri arịlịka ise nke nha dị iche iche. A na-elekwasị anya na ndị ọchụnta ego n'oge mbụ (mmalite, ndị na-achọsi ike na grassroots) nwere oke ohere ịnweta akụrụngwa na nri ekpokọtara, ọrụ nri na ụlọ ọrụ iri nri. Na mgbakwunye na 17 obere azụmahịa arịlịka, 84 ọhụrụ ọrụ na asatọ ọhụrụ azụmahịa e kere, 70% ojii nwere, 33% ụmụ nwanyị na-edu.
Ha jigidere mmemme nkuzi na nkuzi, nyere onyinye (R591,000) na ngwugwu nri R1.3m ma gaa n'ihu na-akwado Desk Justice na Nyanga Township.
Iji kwado njide ọrụ na SMMEs, ha welitere isi ego iji kwado azụmahịa 49, ngụkọta R2.52 nde, na-akwado 208 na-adịgide adịgide na ọrụ 111 nwa oge ma nye ohere nyocha na nkwado ego na nkwado mgbazinye R20 nde ndị nwe ụlọ 270. Site na ubi ha mepere emepe, ha enyela Ladies of Love, mmemme nri ime obodo nke na-enye ndị ogbenye nri, dị n'okpuru tọn 6 tọn akwụkwọ nri, nke sitere na nri 130 000 na kichin 12 n'ime afọ abụọ. V&A Waterfront nwere ike ịtụ anya inwe mmetụta dị ukwuu; ọ na-eme.
Ụzọ ọhụrụ ha na mkpebi siri ike ịga n'ihu na-eto eto ohere maka obodo ndị nwere nsogbu na ndị a kpapụrụ n'ike masịrị ndị ọka ikpe ahụ.
Ebe ewulitela azụ ka mma Post-Covid
N'ime ihe nrite nke afọ gara aga, anyị hụrụ ọtụtụ ebe na-amalite ịtụgharị uche na mpịakọta ndị njem na mpaghara ahịa nke ha ga-adọta post-Covid na ụfọdụ ndị na-atụle ịzụ ahịa. Ọrịa na-efe efe akwụsịla mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na-enweghị atụ. Ọtụtụ ebe aga enweela "ume". Ihe ncheta ka ebe ha dị tupu igwe mmadụ abịarute. Ohere iji chegharịa njem nlegharị anya na ikekwe ikpebi iji njem nlegharị anya kama iji ya mee ihe.
Otu n'ime ebumnobi nke onyinye nlegharị anya nlegharị anya bụ ịgba ndị azụmaahịa na ebe ị ga-aga ka ha mụta ihe n'aka ndị ọzọ, megharịa na ịkwalite mmezu ya. Ndị ọka ikpe maka onyinye onyinye Global chọrọ ịmata ma mee emume ka Madhya Pradesh si enweta mmụta site na ndị ọzọ, ọkachasị ndị ọrụ njem nlegharị anya na Kerala, iji mee ngwangwa na itolite mmetụta ya maka obodo ime obodo.
A na-emejuputa mmemme njem nlegharị anya ime obodo nke Madhya Pradesh n'ime obodo iri isii na nke mbụ yana 60 n'agba nke abụọ n'ime afọ atọ. Ihe oru ngo a na-enye onye njem nlegharị anya nke kachasi nma na nke na-emebi obodo site na otutu ihe omume ime obodo dika njem ugbo ehi, ugbo na omenala omenala na ohere iji nọrọ n'ebe obibi n'ime ime obodo iji weputa oru na ohere ahia ozo maka obodo ime obodo.
Nleta ngosi na ọzụzụ dabere na mkpa maka ịrụ ọrụ ebe obibi, isi nri, ahụike na ịdị ọcha, idebe akwụkwọ na ndekọ ego, idebe ụlọ, njikwa ụlọ ndị ọbịa, nduzi, uche maka ndị njem, foto na ịde blọgụ ka a na-enye. Ọbịbịa nke ndị njem nlegharị anya ewepụtala ọrụ maka ndị nduzi, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị na-ese ihe, na ohere ndị ọzọ maka irere ndị ọbịa ngwaahịa na ọrụ. Ndị na-arụ ọrụ n'ime obodo na-etinyekwa aka na nhazi nke akụ na ụba obodo site na mmepe aka na nkwalite n'okpuru mmemme mmepe ihe ncheta.
N'ime obi nke oru ngo a bụ ntinye aka na nsonye, ​​"Otu na onye ọ bụla kwesịrị inweta òkè ziri ezi". Ha na panchayats na-arụkọ ọrụ iji tinye ndị mmadụ n'agbanyeghị agbanyeghị nke ọha mmadụ (anụ ahụ, ọkwa agụmagụ, okike, ikike, okpukperechi, ihe mgbochi omenala, wdg) na ọnọdụ akụ na ụba (nnweta ala, ọkwa ego, ịnweta ọrụ na-eme ka ohere akụ na ụba, wdg.)
Na-abawanye Diversity na njem nlegharị anya: kedu ka ụlọ ọrụ anyị si metụta?
Anyị na-eme njem ịhụ omenala, obodo na ebe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ebe niile bụ otu, gịnị kpatara njem? N'agbanyeghị na anyị na-achọ ụdị dị iche iche site na njem, anyị achọpụtala na ọ bụghị mgbe niile ka a na-egosipụta ụdịdị dị iche iche na ụlọ ọrụ na-enyere ndị ọzọ aka inwe ahụmahụ dị otú ahụ. Ọdịiche dị iche iche bụ okwu sara mbara: “ njirimara na-agụnye, mana ọnweghị oke na, ikike, afọ, agbụrụ, njirimara nwoke na nwanyị na nkwupụta, ọkwa mbata na ọpụpụ, ndịiche ọgụgụ isi, agbụrụ mba, agbụrụ, okpukperechi, okike, na usoro mmekọahụ.
Anyị anaghị atụ anya ịhụ otu nzukọ meworo ọganihu pụtara ìhè na ihe ndị a niile n'ime afọ ole na ole gara aga. Maka ụlọ ọrụ anyị, ọ bụ onye anyị na-arụrụ ọrụ n'ọkwa dị iche iche, ndị anyị na-ere ahịa, ụzọ anyị si egosi ebe anyị na-ere, ụdị ahụmahụ anyị na-akwalite, na akụkọ anyị na-akọ. Kedu ka anyị si egosipụta ụdị dị iche iche nke ebe anyị na-ere?
Otu a bụ ihe ọhụrụ nye onyinye afọ a, anyị nwetara ndenye dị iche iche.
Ndị ọka ikpe ahụ nwere mmasị na ụdị dị iche iche na ahụmịhe sara mbara nke enweghị akara ukwu na-enye ndụ nke oge a na Mumbai, na-enye ezi nghọta nye ndị njem na ndị na-eme ezumike. Aghọtara ha dị ka onye na-eme njem nlegharị anya kacha mma na India Responsible Tourism Awards na 2020: “Ọ nweghị akara ụkwụ na-enyere ndị ọbịa aka ijikọ na obodo ndị mebere obodo ahụ ihe karịrị ọgbọ, izute ha, na ịnụ akụkọ ha. Ọ nweghị akara ukwu na-enye ohere izute Parsees, Bohris, ndị East India na ndị obodo. N'afọ 2021, a matala ha na WTM Global Responsible Tourism Awards.
Enweghị akara ukwu na-achọpụta ahụmịhe njem niche maka ndị njem. N'ime afọ isii gara aga, ha emepụtala ahụmịhe Mumbai iri abụọ na abụọ ma na-agbasawanye ugbu a na Delhi. Ebumnuche ha bụ ịmebata ndị njem na akụkọ ihe mere eme, omenala, na ndị dị iche iche nke Mumbai na Delhi. N'ime njem nlegharị anya ha kacha ewu ewu bụ Mumbai n'isi ụtụtụ, nri nri n'okporo ámá, Worli Fishing Village, Colonial Walk na njem ọhụụ ha mere iji mebie uche ise, nlegharị anya na ụda, gụnyere ahụmahụ onwe onye nke Bollywood, uto nke Konkan njem, na na-esi ísì ụtọ ahịa na imetụ Mumbai aka site na mmemme n'ime obodo ma ọ bụ site n'ịgwa ụgbọ oloko juru ebe niile.
Ha na-enye ogbako nka na ebe a na-esi nri, njem nlegharị anya ihe nketa na ohere iji nweta obi ụtọ nke cricket. Ọ nweghị akara ukwu na-agbasa ụdị nlegharị anya ndị a na-enye ndị njem na ike nke ahụmịhe ha na-enye. Ndị ụlọ ọrụ dị iche iche na-enye njegharị Queer *-enyi na enyi n'ofe India. Ọ nweghị akara ukwu agaferela ịbụ enyi nwoke nwere mmasị nwoke. "Ọ dịghị Ụkwụ 'Queer's Day Out na-enye ụbọchị zuru oke nke ime egwuregwu na akụkụ dị iche iche na-eme ka ndụ ndị Queer nọ n'ime obodo. Njem ahụ na-agụnye nleta na ụlọ nsọ nke chi nwanyị nke ndị obodo transgender omenala na-efe na-eme ka ohere maka mkparịta ụka gbasara njem ụgbọ mmiri na Grindr, Nganga, Ịpụ na Dọrọ. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-ahazi ma na-eduzi njegharị ahụ, na-ahụ na izi ezi yana na-enyere ndị njem nlegharị anya aka inweta nghọta na omenala Queer nke obodo ahụ.
Mbelata ihe mkpofu plastik na gburugburu
Ọrịa ọjọọ nke Covid-19 abawanyela ọnụ ọgụgụ plastik a na-eji otu eme ihe, na-agbakwunye na nsogbu mkpofu rọba. Ihe mkpofu rọba na-abanyezi n'usoro nri nke ụdị ndị ọzọ yana nke anyị. Ozugbo plastik batara n'akụkụ mmiri, ọ na-ejedebe na gyros nke ihe mkpofu n'oké osimiri, n'akụkụ osimiri na n'ime afọ azụ anyị na-eri. Ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị imekwu ihe iji belata ojiji ọ na-eji plastik na-eji otu eme ihe ma na-arụ ọrụ ma soro ndị obodo na gọọmenti ha na-arụkọ ọrụ iji jide plastic mkpofu na ụgbụ na ihe mgbochi na-ese n'elu mmiri ma na-ebuli ya dị ka cobbles, ngwá ụlọ na ọrụ aka.
Ndị ọka ikpe zuru ụwa ọnụ nwere mmasị na ụzọ dị iche iche ndị ọrụ ahụ siri rụọ ọrụ iji belata ojiji plastik na ebe a na-eme njem na imezigharị usoro ọkọnọ ha iji kpochapụ plastik.
Na Six Sense Resort na agwaetiti Maldivian nke Laamu, ndị ọbịa na-esonye na njem Sustainability iji hụ ihe ọhụrụ na nnwale na-arụ ọrụ na Lab Earth ha, ebe ha nwere izu ike na efu efu. Ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala onwe ya ihe mgbaru ọsọ nke ịghọ ihe na-enweghị plastik na 2022. Nke a gụnyere ihe niile dị n'ihu plastik kamakwa ihe oriri. Otu n'ime ihe ịma aka kasịnụ ha nwere bụ igbe styrofoam ndị na-akụ azụ nọ n'ógbè ahụ na-eji echekwa ihe ha nwetara tupu ha ebute ya n'ebe a na-eme njem, ndị ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ na ndị na-ebubata nkwakọ ngwaahịa na ndị na-akụ azụ obodo ma ugbu a, a na-ebuga nri n'ebe a na-eme njem na igbe kaadiboodu nke etinyere n'ime ime ya na panels. nke hemp, jute, na osisi fibers, 100% biodegradable na compostable na iwepu 8,300 igbe styrofoam kwa afọ. Site na reverse osmosis nke ultraviolet na-esochi, a na-asachapụ mmiri nnu akọrọ, kpochaa ma mee ka ọ dị mma maka ịsa ahụ na ịṅụ mmanya na karama iko.
Ogige akwụkwọ ha na-enye ahịhịa na ahịhịa dị iche iche iri anọ, na 'Kukulhu Village' na-enye akwa na ọkụkọ maka ụlọ nri ha. Site n'iwe ihe ubi n'agwaetiti ahụ, ebe a na-eme njem nwere ike ibelata ngwugwu nri rọba nke ukwuu. Ha na-ere ngwá ọrụ na-enweghị rọba na ụlọ ahịa ahụ, nke gụnyere karama mmiri a na-emegharịgharị, akpa a na-emegharị emegharị, brọsh eze achara, na pensụl osisi. A na-ezigara ndị ọbịa ndụmọdụ ịkwakọ ngwaahịa na-arịọ ndị ọbịa ka ha hapụ ngwaahịa rọba na-eji otu eme ihe n'ụlọ wee buru ihe mkpofu rọba ọ bụla n'ụlọ ebe enwere ike ịmegharị ya nke ọma. A na-eji ụgbụ azụ̀ gbahapụrụ agbahapụ, nke a na-asachapụ n'ụsọ oké osimiri, na-awụli elu.
Pasent 97 nke ahịa mmiri n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ isii niile nke Laamu na-abanye na ego na-enye ndị obodo nwere mkpa mmiri ọñụñụ dị ọcha, nke a pụrụ ịdabere na ya. Sense isii Laamu pụtara maka itinye ihe nzacha mmiri zuru oke (6.8) n'ime obodo iji kpochapụ karama mmiri plastik karịrị nde 200 kwa afọ. Ha emeela ihe karịrị XNUMX osimiri na mmiri dị ọcha - gụnyere ịnyefe data na Project AWARE- ma mee nnọkọ mmụta maka ndị otu niile na-ahụ maka mmetọ rọba na njikwa mkpofu.
Na-eto eto uru akụ na ụba mpaghara
A ka nwere ebe maka CSR1.0 na philanthropy, dị ka pụtara ìhè site na afọ gara aga na-akwado ndị ọrụ na obodo site na oria ojoo. Otú ọ dị, site n'ịgbanwe ụzọ ha si azụ ahịa, ndị na-enye ụlọ na ndị na-eme njem nlegharị anya nwere ike ịmepụta ohere ahịa ọzọ maka obodo ndị dị n'ógbè ahụ na ụdọ ha na-enye ha ma mepụta ohere iji resị ndị njem nleta ngwa ahịa na ọrụ.
Nke a na-eme ka akụ na ụba obodo dị iche iche ma na-eme ka ebe a na-aga n'ụzọ dị mma, na-ekepụta ebe obibi ọzọ maka ndị obodo yana ọtụtụ ihe omume, nri na ihe ọṅụṅụ, na ngwaahịa nka na nka maka ndị njem nlegharị anya. Ebe nwere ike inyere mgbanwe ndị a aka site na, n'etiti ihe ndị ọzọ, inye obere ego, ọzụzụ na nduzi, ịmepụta ebe ahịa na oghere arụmọrụ na inye enyemaka ahịa.
N'ihe gbasara ọrịa a, ndị ọka ikpe zuru ụwa ọnụ na-achọ azụmahịa ndị rụsiri ọrụ ike iji kwado na ịzụlite mmekọrịta n'etiti ndị ọbịa gara aga na ndị nwere ike, na-eji ntụnye na ntinye aka iji mepụta azụmahịa ụlọ na mba ụwa site na njem nlegharị anya. Ha hazigharịrị azụmahịa ha ma kwalite nkà nke ndị ọrụ ha n'ụlọ ọrụ Mumbai iji hụ na Ụzọ Obodo nwere ike isi na ọrịa a pụta.
Mgbe Covid kụrụ, njem nlegharị anya kwụsịrị. Ụzọ obodo emebere site na imepe njem nlegharị anya na obodo ime obodo, gụnyere ihe ngosi cookery, njem nlegharị anya nke ọ bụla dọtara ihe ruru ndị sonyere 200, na-emeghachi ndị enyi ochie n'ofe ether. Village Ways nwere ihe ịga nke ọma n'inweta nkwekọrịta ọzụzụ site na Madhya Pradesh. Ha hazigharịrị, mechie ụlọ ọrụ ahịa UK ha, na-eme atụmatụ ịwepụta mbọ ahịa na UK, na ịzụlitekwu nkà nke isi ụlọ ọrụ Mumbai.
Ha na-ebu ụzọ wughachi site na ahịa ụlọ India. Ụdị Village Ways pụrụ iche. A na-akpọ ndị ọbịa ka ha gagharịa n'okirikiri ala site n'obodo nta ruo n'obodo nta nwere onye ndu obodo na-anọ n'ụlọ ndị ọbịa nke obodo wuru, nke ndị obodo nwere, na-elekọta ma na-arụ ọrụ. Kọmitii obodo niile na-ahụ maka ụlọ ndị ọbịa na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọrụ Binsar malitere ụzọ Village na 2005, na-arụ ọrụ na obodo ise. Ha na-arụkọ ọrụ ugbu a na obodo 22 na-ebuga uru akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze na-ahụ anya, na-enwe ohere ọrụ maka ndị na-eto eto nwere ike ịkwaga n'obodo ukwu. Ego njem nlegharị anya na-emeju kama dochie ego ndị ọzọ ka ezinaụlọ ghara ịhapụ ọrụ ọdịnala dịka ọrụ ugbo. Ha na-akwalitekwa nha anya nwoke na nwanyị na nsonye n'obodo.